ဒညင်းသီး ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့သူများ အတွက် ဘေးမဖြစ်အောင် ပါးစပ်မနံအောင် စားလို့ရတဲ့နည်း - Focus Myanmar
ဒညင်းသီး ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့သူများ အတွက် ဘေးမဖြစ်အောင် ပါးစပ်မနံအောင် စားလို့ရတဲ့နည်း
August 23, 2019 By Myanamr Plus in ကျန်းမာရေး Tags: ဒညင်းသီး
မနေနိုင်လို့ စားတော့မယ်ဆိုရင်နာနတ်သီးနဲ့ ပြုတ်တဲ့ ဒညင်းသီးပြုတ် နာနတ်သီးအချို အချဉ် တွေက ဒညင်းသီးအရသာကိုပိုမိုကောင်းစေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလည်း သက်သာစေပါတယ် ထန်းညှက်နဲနဲ ထဲ့ပြုတ်ပိုကောင်းပါတယ်ဒညင်းသီးကို တခါတရံမှ စားပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ပြုတ်စားဖြစ်ပါတယ် #Ericmoon ကတော့ နာနတ်သီးကို လွှင့်ပလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ထပ်ဆင့် အကြံပြုချက် £စိတ်မဆိုး ဆနွင်းလုံးတညင်းသီးစားပီးရင် သခွားသီးကိုနိုင်အောင်စား မနံဘူးတညင်းသီးစားပြီး ရှေက်ရွက်စားပါ။ ရှောက်ရွက်ကကျောက်ကပ်အတွက်ပါ။ဆားနဲ့ပြုတ် တာတော့ အကောင်းဆုံးပါ ဒညင်းသီး အဆိပ်က ဆားရည် ထဲမှာ ပျော်ဝင် တာ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ် ထား တာ ပါခ်ခ် ဆားနဲ့ ၂ရေပြုတ် ပြီးရေသွန် ပြီးမှ နာနတ်သီးနဲ့ ပြန်ပြုတ် ???? ဒညင်းသီးစားပြီးမာလကာရွှက်ဝါးစားပြီးပလုတ်ကျင်းမနံတော့ဘူး။
ဒညင်းသီးစားပြီး#Lu Luနာနတ်သီးဝယ်ထားပြီးပြီ ဓညင်းသီးလဲအဆင်သင့်။ ကျောက်ကပ်မထိအောင် ရေများများသောက်ရမယ်တဲ့#Ericmoon moonဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါတော့ အမှနိဆုံးဘဲ လမင်းတော့ သံပုရာရည် များများသောက်တယ်ထျန်းညက်တစ်လုံးလောက်စားရင် ပါးစပ်မနံဘူးလက်တွေ့
လေးစားစျြာဖင့် ခရစ္ဒက် — xyznews.
မနနေိုငျလို့ စားတော့မယျဆိုရငျနာနတျသီးနဲ့ ပွုတျတဲ့ ဒညငျးသီးပွုတျ နာနတျသီးအခြို အခဉျြ တှကေ ဒညငျးသီးအရသာကိုပိုမိုကောငျးစပွေီး ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ ထနျးညှကျနဲနဲ ထဲ့ပွုတျပိုကောငျးပါတယျဒညငျးသီးကို တခါတရံမှ စားပမေယျ့ ဒီလိုမြိုး ပွုတျစားဖွဈပါတယျ #Ericmoon ကတော့ နာနတျသီးကို လှငျ့ပလိုကျပါတယျတဲ့။
ထပျဆငျ့ အကွံပွုခကျြ £စိတျမဆိုး ဆနှငျးလုံးတညငျးသီးစားပီးရငျ သခှားသီးကိုနိုငျအောငျစား မနံဘူးတညငျးသီးစားပွီး ရှကျေရှကျစားပါ။ ရှောကျရှကျကကြောကျကပျအတှကျပါ။ဆားနဲ့ပွုတျ တာတော့ အကောငျးဆုံးပါ ဒညငျးသီး အဆိပျက ဆားရညျ ထဲမှာ ပြျောဝငျ တာ သိပ်ပံနညျးကစြမျးသပျ ထား တာ ပါချချ ဆားနဲ့ ၂ရပွေုတျ ပွီးရသှေနျ ပွီးမှ နာနတျသီးနဲ့ ပွနျပွုတျ ???? ဒညငျးသီးစားပွီးမာလကာရှကျဝါးစားပွီးပလုတျကငျြးမနံတော့ဘူး။
ဒညငျးသီးစားပွီး#Lu Luနာနတျသီးဝယျထားပွီးပွီ ဓညငျးသီးလဲအဆငျသငျ့။ ကြောကျကပျမထိအောငျ ရမြေားမြားသောကျရမယျတဲ့#Ericmoon moonဟုတျကဲ့ အဲ့ဒါတော့ အမှနိဆုံးဘဲ လမငျးတော့ သံပုရာရညျ မြားမြားသောကျတယျထနျြးညကျတဈလုံးလောကျစားရငျ ပါးစပျမနံဘူးလကျတှေ့
လေးစားစွာဖြငျ့ ခရစ်ဒကျ — xyznews.